Hacked Subdirectories Amin'ny WordPress Sites - Semalt Expert amin'ny sehatra vaovao momba ny spam
Vao haingana, nisy ny fanambarana momba ny tranga ao amin'ny SEO spam, izay midika ho fametrahana votoaty malaza sy subdirectories ao amin'ny tranokalan'ny WordPress. Ireo spammers sy hackers dia mampiasa ity paikady mainty SEO ity noho ny fanararaotana ny loharanom-pitaovana sy ny fitehirizana azy. Mametraka votoaty an-tsoratra ao amin'ny WordPress anao izy ireo ary manetsiketsika fanodikodinam-borona manimba ny pejy web anao.
Alexander Peresunko, mpanazatra ambony avy amin'ny Semalt , dia mamelabelatra momba ny olana ara-pitsarana sasantsasany momba izany.
Ny tranonkala spam dia manentana ny vokatra sy ny serivisy amin'ny fotoana tsy tapaka. Ohatra, maro ireo tranonkala spam dia manamboatra solomaso sy vokatra fanangonana, manintona ny vahoaka amin'ny fandaharan'asa fidiram-bola avy amin'ny fikambanana izay tarihin'ny hackers. Ity teknika ity dia apetraka amin'ireo programa hacking hafa satria manitsy ireo mpampiasa azy ho amin'ny rohy hafahafa sy ratsy. Afaka manimba ny endrik'ilay tranonkala izany ary manangona ny fampahalalam-baovao momba ny carte de crédit ao amin'ny aterineto.
Ireo mpanakorontana sy spammers dia mirakitra ireo tricks amin'ny alàlan'ny fanakanana ireo tranonkala spam ao anatin'ny sehatr'ireo toerana ara-drariny, ary ny tena mahasosotra indrindra dia ny tsy hitan'ny mpamaky na ny tompon'ireo tranonkala. Amin'ny vanim-potoana, lasa zava-dehibe ny fanaraha-maso ny fiarovana ny tranokalanao ary nanao fanovana sasany ao amin'ny kaontinao WordPress. Azonao atao ny mampiasa ny Google Search Console mba hahalalanao raha miparitaka ny tranonkalanao ireo mpanafika. Ireo manam-pahaizana ao amin'ny Semalt dia manolotra ity fitaovana ity ho an'ireo mpanjifany izay maniry hanatsara ny kalitaon'ny tranonkala. Raha mahita fanontaniana be dia be ao amin'ny boaty fanehoan-kevitra ao amin'ny tranonkala ianao, dia mety ho vintana amin'ny hack SEO ianao. Indrisy anefa fa tsy misy fomba hijerena ity olana ity, ary tsy maintsy mamorona tranokala iray manontolo ianao.
Tsy tokony ho voafandrik'ireo mpihetraketraka na hampiasa fomba maro samihafa ianao mba hiantohana ny fiarovana sy ny fiarovana amin'ny Internet. Amin'ny ankabeazan'ny tranga, ireo mpitsikilo dia manafika ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny sora-bavahadin'ny tranonkala sy ny spam, izay sarotra ny mamantatra. Na dia izany aza, misy fomba sasany hisorohana ireo mpihoko tsy hanafenana ny fehezan-dalàna ao amin'ny vohikalanao WordPress ara-dalàna.
Ny fanadihadiana momba ny spam, izay antsoina hoe loharanom-pitaovana, dia ampiasaina mba handinihana ireo tranga izay hanoheran'ireo hackers ny tranonkalanao mba hahazoana tombony amin'ny sehatra SEO anao. Ankoatr'izay, manararaotra ireo teknika fotsy SEO fotsy izay efa nampiasainao hametrahana ny tranokalanao ao amin'ny fikarohana fikarohana. Tsy toy ny fanovàna malaza, ity karazana spam ity dia tsy afaka manova ny fijery sy ny endrik'ilay vohikala voaroba Source .